Golaha wasiirrada dowladda Federaalka Soomaaliya oo soo saaray go’aamo la xiriira ammaanka.[Dhagayso]
May 11, 2017 - Written by Editor
Muqdisho:- Golaha wasiirrada dowladda Federaalka Soomaaliya oo ku shiray magaalada Muqdisho ayaa soo saaray go’aamo lugu sheegay amniga in lugu xaqiiji nayo. Shir wasiirrada waxaa kale oo lugu soo dhaweeyay shirka socd London,iyagoo markaasna u mahadceliyey Dowlada UK iyo beesha caalamka oo u istaagay in Soomaaliya laga taageero dhanka amniga, dhaqaalaha iyo siyaasada si dalka loo gaarsiiyo doorashooyin hal cod iyo hal qof ah.
Hoos ka akhri qodobbada amniga la xiriira ee wasiirrada ay soo saaren:-
b. Aan wadanin warqad fasax dhaq-dhaqaaq ah. Ciddii ku xadgudubta awaamiirtan, waxay mutaysan doonaan in Sharciga lala tiigsado.
8. Waxaa Taliska Ciidanka Boliiska laga doonayaa in muddo 60 casho ku eg ay ku soo dhisaan ciidamo gaar ah oo ilaaliya madaxda Qaranka iyo goobaha Muhiimka ah ee Dowladda.
Hoos ka Dhagayso go’aamadii ka soo baxay shirka ay maanta yeesheen golaha wasiiradda dowladda Federaalka Soomaaliya
Halkaan ka Dhagayso Mp3